Ankoatra ny takelaka lehibe dia misy ny fanazavana anatiny sy ivelany. Mampihena ny fandaniana herinaratra avy amin’ny Jirama ampiasaina ao amin’ny ivontoeram-pitantanana ankapoben’ny angovo io. Io tetikasa io izay nampisalorana ny anarana hoe :”Projet de demonstration” io, dia novatsian’ny Vondrona Eoropeanina vola, ary ny UE-COI Energies kosa no nanatanteraka ny asa teo ambany fiahian’ny Kaomisionin’ny Ranomasimbe Indianina. Manampy betsaka amin’ny tetikasa mifandraika amin’ny angovo azo havaozina ny programa UE-COI Energies, ka anisan’ny hisitraka izany ny any Sarobaratra, Akamasoa, Itasy. Eo ihany koa ny Biogaz any Ambilobe, Ambanja, indrindra ny IOSnet iarahana amin’ny Méteo Malagasy. Irosoana eto Madagasikara amin’izao ny fiampitana tsimoramora mankany amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina. Ny atrik’asa roa andro tetsy amin’ny Hotely Colbert ny 23-24 oktobra teo, dia nentina nankatoavana ny tetikasa momba ny paikady rejionaly ho amin’izany. Nanantitrantitra omaly ny minisitry ny angovo fa vahaolana maharitra amin’ny olan’ny angovo eto Madagasikara ny firosoana amin’ny angovo azo havaozina ary ireo tooeram-pamokarana herinaratra vaovao haorina dia hifantoka amin’izany mba hialana amin’ny fampiasana solika.